RW Kheyre: “Farmaajo dalka halaga qabto” | KEYDMEDIA ONLINE
RW Kheyre: “Farmaajo dalka halaga qabto”
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, ayaa sheegay in dalku uu maanta taagan yahay halkii uu ka digayay markii uu iska casilay xilka RW.
Muqdisho, Soomaaliya –Ra’iisul Wasaare, Xasan Cali Kheyre, wuxuu Maxamed Cabdullaahi farmaajo, ku eedeeyay inuu dalka ka riday haadaan, abuuray hubanti la’aan siyaasadeed, masuulna ka yahay xasaradda maanta aloosan.
“Mid waan hubaa oo su´aal kama taagna, ineysan dhici doonin in madaxweynaha uu xilkiisu dhamaaday uu sharci daro iyo qori caaradii xukunka dalkan kusii heysto”. Ayuu yiri, RW, Khayre, oo si cad u sheegay in Farmaajo diiday heshiis kasta oo dalku ku aadi lahaa doorasho la isla oggol yahay.
RW, Kheyre, wuxuu is weydiiyay su’aal ah, “ilaa intee le´eg ayuu Farmajo, dib noo celin karaa ama horumarkii yaraa ee aan sameynay naga burburin karaa”?. Taas oo qudheedu ka mid ah walaaca ay mar kasta muujiyaan Wakiillada Beesha caalamka ee jooga Soomaaliya.
Dhib kasta oo dhaca ayuu sheegay inuu dusha saran doono Farmaajo, maadaama uu doonayo hirgalinta doorasho boob ah, iyo u tafa-xeydashada kali talisnimo, kala tag sababi karta.
“Wax kasta oo maanta dhacaya ama dhici doono, hal qof ayaa masuul ka ah, waana madaxweynaha uu xilkiisu dhamaaday ee raba inuu xoog, xikmad la´aan iyo sharci daro kusii heysto xukunka dalka”. Ayuu yiri Kheyre.
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya, wuxuu ku baaqay in guud ahaan dadka Soomaaliyeed indhaha kala furaan, arkaanna halka uu wax u wado, Farmaajo, oo maanta maraya in Ciidankii Dowladda ay labo garab u kala jabeen.